Haddii ay kaa bad-badatay AMMAANTA Kante waxaa iminka la ogaaday CEEBTIISA….(Willian iyo Luiz oo kashifay…) – Gool FM
Haddii ay kaa bad-badatay AMMAANTA Kante waxaa iminka la ogaaday CEEBTIISA….(Willian iyo Luiz oo kashifay…)
(London) 22 Nof 2018. Kubbad bur-buriyaha Chelsea N’Golo Kante ayaa lagu sheegaa inuu yahay laacibka ugu daacadsan uguna xishoodka badan kubbada cagta.
Xiddiga reer France ayaa wata baabuur raqiis ah isagoo awooda inuu iibsado kuwa ugu qaalisan, sidoo kale wuxuu ka jawaabaa codsiga taageerayaasha isagoo xitaa si fiican ula macaamila taageerayaasha kooxaha ka soo horjeeda taa oo muujineysa inuusan qabin wax isla waynin ah haba yaraatee.
Sidoo kale Kante ayaa la wariyay in xishood uu qabo darteed uu xitaa codsan waayay inuu kor u luxo koobka Adduunka mar uu xulkiisa Faransiiska ku guuleystay iyadoo uu mar dambe laacib garowsaday dhibkiisa isla markaana koobkii u keenay.
Yeelkeede, xiddigaha ay isku kooxda yihiin ee Willian iyo David Luiz ayaa tooshka ku ifiyay ceebta uu leeyahay Kante iyagoona sheegay inuu bilaash wax uga cuno Maqaayadooda Babbo.
“Way jecelyihiin Maqaaxideena sida caadiga ah way yimaadaan halkaan wax lacag ahna ma bixiyaan, Gaar ahaan N’Golo Kante,” Luiz ayaa sidaa yiri.
Willian ayaa isna yiri: “Haddii aad Kante waydiiso inuu lacagta bixiyo, Wuxuu leeyahay waa inaan bixiyaa, Oh Maya! Adiga iyo David Luiz waad fiican tihiin, qalbi nadiif ayaad leedihiin.
David Luiz ayaa wuxuu sheekada ku sii daray:
“Xitaa haddii aan hortooda ka dhoho ‘war lacagta bixiya’ Kante wuxuu ornayaa ‘ Ma bixinayo'”.